Mahomby sy azo antoka ve ny fahazavana 222nm UVC? -UVC Fahalalana-FETON CORPORATION Co., Ltd
Horonan-tsary UVC Solution
Fotoana: 2020-05-01 Hits: 472
Tamin'ny 29 martsa, vokatra iray lehibe no navoaka an-tserasera tao amin'ny Photochemistry & Photobiology, mitondra ny lohateny hoe "Jery maharitra vokarin'ny taratra ultraviolet C 222nm C amin'ny totozy mora tratran'ny taratra ultraviolet".
Fikarohana iraisan'ny Kobe University sy Ushio Ins. ary nanome ny porofo voalohany manerantany fa ny fahazavana mivantana sy miverimberina momba ny sterilizer 222nm UVC mahery dia tsy hiteraka homamiadan'ny hoditra ary azo antoka ihany koa ho an'ny mason'olombelona sy ny hodiny.
Ny ekipan'ny mpikaroka dia nampiharihary ireo totozy tamin'ny jiro ultraviolet isan-karazany tao anatin'ny vondrona samihafa, ny vondrona iray dia niharan'ny jiro mikraoba 222nm, ary ny tarika iray kosa voan'ny hazavan'ny UVB (280-315nm).
Taorian'ny fandinihana iray dia hitan'ny ekipa reasearch fa ny totozy voan'ny UVB dia voan'ny homamiadan'ny hoditra ary naneho ny fiatraikany ratsy, fa ny totozy ao amin'ny vondrona jiro mikraoba 222nm kosa dia tsy voan'ny homamiadan'ny hoditra mihitsy.
Ny ekipa reasearch koa dia nanadihady ny vokany teo amin'ny mason'izy ireo, ary tsy nisy tsy fahita hita na dia teo ambanin'ny mikraoskaopy aza.
Noho izany, nino izy ireo fa ny 222nm UVC dia mahery vaika amin'ny famonoana zavamiaina bitika, toy ny viriosy sy bakteria, nefa tsy manimba ny loza mety hitranga amin'ny fahasalaman'ny olombelona noho ny haavon'ny fidiran'ny hoditra.
Afaka mamono virus ve ny UV 222nm?
Fantatry ny mpahay siansa nandritra ny am-polony taonany maro fa ny hazavana UVC voajanahary izay manana halavam-potoana manodidina ny 254 nm dia azo ampiasaina hanamorana sy hamongorana ireo toerana banga toy ny efitrano banga na fiara ao anaty metro, fa ireo hazavana ultraviolet mahazatra dia tsy azo ampiasaina amin'ny toerana be olona satria fahasalamana izany. loza.
Mba hialana amin'ity olana ity dia nanomboka nianatra ny hazavana UVC lavitra (halavan'ny 222 nm) ny mpahay siansa.
Fandinihana vaovao iray tao amin'ny Ivotoerana fikarohana momba ny Radiolojika ao amin'ny University of Irving Medical Center any Columbia izay mampiseho fa ny fatra ambany farafahakelin'ny Far-UVC dia afaka mamono amin'ny fomba mahomby ireo viriosy gripa azo avy amin'ny rivotra manimba ny tenan'olombelona.
Jiro UV-lavitra manana halavan'ny 222nm ny halavany ary manana ferana voafetra ary tsy afaka miditra amin'ny hoditry ny olombelona na amin'ny maso. Saingy fantatra fa mahafaty izy ireo amin'ny zavamiaina bitika toy ny virus, bakteria, sns.
Satria bitika kely kokoa noho ireo sela olombelona ireo zavamananaina ireo, ny hazavana UVC lavitra dia miditra ao amin'ny ADNn'izy ireo ary manala azy ireo. Mampitsahatra ny fananana miteraka sy fampitomboana azy io, avy eo, manakana azy ireo tsy hiasa.
Izy io dia fomba mahomby handotoana ny tontolo iainana sy hampiatoana ireo mikraoba satria ny ankamaroan'ny viriosy sy bakteria dia mitety ny rivotra.
Ny fahatsapan'ireo zavamiaina bitika amin'ny hazavana UVC lavitra dia manome sosokevitra fa mety ho azo tratrarina sy azo antoka ny fampiasana jiro UVC lavitra any amin'ireo toerana be olona.
Amin'izany fomba izany, ny toerana iray feno olona dia azo diovina sy voadio amin'ny tany fa tsy manimba ny olombelona ary koa mihena ny loza ateraky ny viriosy any amin'ny toerana be olona.
Toa faly amin'ny 222nm UVC izy ary maro ny fampiharana azo atao azo tanterahina.
Nieritreritra mihitsy aza ny olona fa ny 222nm UVC dia afaka soloina ireo mpanadio ranon-dra mahazatra izay apetraka amin'ny toerana be olona toy ny trano fisakafoanana, metro, sekoly, kabine, sns.
Maninona raha asiana UVC 222nm hiasa?
Ny hevitra momba ny famokarana hazavana ultraviolet amin'ny halavan'ny 222nm amin'ny sehatra ampahibemaso sy eto an-toerana dia tsara ary afaka manampy tokoa amin'ny fandresena karazan'aretina sasany izay azo ampitaina amin'ny alàlan'ny tontolo iainana na ny fifandraisan'olombelona.
Azo antoka fa hampihena ny tetibola laniana amin'ny indostrian'ny fahasalamana izany satria hampihena ny isan'ny olona voakasik'izany.
Saingy tsy dia mora ny mampihatra izany.
Betsaka ny fahasarotana tafiditra amin'ny fampiharana sy fampiasana tanteraka an'io haitao io ho an'ny sarambabem-bahoaka. Vitsy amin'izy ireo no voatanisa etsy ambany:
· Tsy misy angona fitsapana ara-pitsaboana
Isaky ny misy fanafody vaovao na vaksinina miforona, dia andrana voalohany amin'ny zavamananaina hafa izay manana endrika maro itovizan'ny olombelona.
Vitsy ny biby fantatry ny mpahay simia ary mety amin'ny fitsapana ireo vaksiny vaovao.
Ohatra, ny ankamaroan'ny vaksiny dia voasedra voalohany amin'ny totozy. Raha ny ambaratonga voalohany amin'ny asa fitoriana dia mahomby, dia notsapaina tamin'ny fianakavian'ireo gidro izy ireo. Betsaka ny andrana fandalinana ny fandalinana alohan'ny hampiasana azy ireo ho an'ny olombelona. Vantany vao tafavoaka ny fitsapana klinika rehetra izy ireo dia omena eny an-tsena ho an'ny zanak'olombelona.
Hatramin'izao, ny siantifika dia manana ny fikarohana ihany mba hanaporofoana fa ny UVC dia tsy manimba ny totozy. Mila mizaha toetra ireo taratra ireo amin'ny biby isan-karazany izy ireo mba tsy hisy vokany mafy amin'ny ain'ny olombelona.
Etsy ankilany, ny mpahay siansa dia nanolotra teoria iray hafa fa mety hisy vokany maharitra eo amin'ny fahasalaman'ny olombelona raha tazonina mandritra ny fotoana lava kokoa ny fiparitahan'ny UVC lavitra. Ny fitsapana fihodinana miverimberina amin'ny totozy, izay niharan'ny 222nm Far-UVC, dia voaporofo fa mampidi-doza amin'ny fahasalamany.
Ny mpahay siansa dia miezaka mafy manangona ny angon-drakitra sy ny vokany, na dia kely aza izy ireo, izay mety vokatry ny Far-UVC.
· Tsy misy vokany mizana
Noho ny haitao tsy matotra, ny chip UVC LED miaraka amin'ny 222nm Far-UVC dia mbola eo amin'ny sehatry ny famokarana batch kely. Betsaka ny fanamby amin'ny famokarana 222nm Far-UVC:
(1) Fitaovana lafo lafo
Amin'ny famokarana bitika kely, ny akora fototra dia vidiana betsaka ary ireo fitaovana ireo dia azo omena an'ireo mpamokatra kely amin'ny vidiny avo kokoa.
(2) Fako ateraky ny vokatra
Amin'ny famokarana bitika kely dia tsy azo atao ny mampiasa by-vokatra ara-toekarena toy ny amin'ny famokarana lehibe. Ny vokarin'ny mpamokatra madinidinika dia ho fako.
(3) Tsy fahampian'ny entana mahazatra
Amin'ny famokarana bitika kely dia tsy manara-penitra na maharaka ny takiana ny kalitaon'ny entana. Sarotra ny mivarotra satria ambany sy ambany ny kalitaon'ny entana.
(4) Tsy fahampian'ny fikarohana
Ny indostria madinidinika dia manana vola voafetra arak'izy ireo. Tsy afaka mandany vola be amin'ny fikarohana amin'ny sehatry ny siansa sy ny teknolojia izy ireo. Amin'izany fomba izany, ny indostria madinidinika dia nanjary sakana tamin'ny fomba fikarohana ara-teknolojia sy ny fampandrosoana indostrialy.
· Vidiny ambony amin'ny LED UVC
Ny iray amin'ireo sakana lehibe amin'ny famokarana 222nm Far-UVC dia ny vidin'ny LED izay mamoaka ny taratra. Na dia sarany indray mandeha aza ho an'ireo fitaovana ireo, saingy somary avo kokoa noho ny LED mahazatra izy io.
Na ny chips 250nm sy 270nm UVC LED aza dia lafo. Diniho bebe kokoa ny famokarana bitika, mitombo ny vidin'ny famokarana isaky ny singa satria misy ny sandan'ny asa, kely ny habaka amin'ny fizarana asa sy ny fampiasana kely ny milina.
Noho izany, ny vidin'ny chip UVC LED miaraka amin'ny 222nm Far-UVC dia ho avo loatra ka tsy eken'ny mpanjifa tsotra.
Amin'ny ankapobeny, amin'ny mason'ny lehilahy mpandraharaha, ny 222nm UVC dia fahitana tsara fotsiny ary mbola lavitra ny lalana tokony haleha.
Related article: Ny torolàlana an'ny mpividy farany amin'ny fividiananao UV Lamps
Taloha: Tokony hividy jiro UV Mercury ve aho?
Next: Nahoana ny jiro ultraviolet dia ampiasaina amin'ny fanamorana?